ရွှေပြည်ရှင်မြင်းဖြူရှင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရွှေပြည်ရှင်မြင်းဖြူရှင် သည် မြန်မာ့မိရိုးဖလာကိုးကွယ်ကြသည့် နတ်တစ်ပါး ဖြစ်သည်။
သက္ကရာဇ် ၅၃၃ ခုနှစ်တွင် ပုဂံပြည်၌ အလောင်းစည်သူမင်း၏ မြေးတော် မင်းယဉ်နရသိင်္ခ ထီးနန်းစံမြန်းလျက်ရှိ၏။ ထိုအချိန်တွင် ပြော့လူမျိုးတို့သည် တောသို့ဝင်၍ ထင်းခုတ်သွားရာ ဝါးလုံးကြီးတစ်ခုအတွင်းမှ အဆင်းအင်္ဂါနှင့် ပြည့်စုံသည့် အမျိုးသမီးကို ရလလေသည်။ ထို့နောက်တွင် ထိုအဆင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် အမျိုးသမီးအား မင်းကြီးကို ဆက်သလေသည်။
မင်းကြီးသည် ထိုဆက်သလာသည့်အမျိုးသမီးအား “နားပျက်ကျယ်သည်” ဟု ဆိုကာ ညီတော်နရပတိစည်သူကို ပေးလေသည်။ ထို့နောက်တွင် မယ်တော်ဖြစ်သူ မိဖုရားကြီးသည် ထိုအမျိုးသမီးအား “ဝေဠုဝတီ” ဟု အမည်ပေးပြီး နားရွက်ကိုလည်း ကြည့်ကောင်းအောင် ဖြတ်ပေးလေသည်။
တစ်နေ့သောအခါ မိဖုရားကြီးသည် ချွေးမဖြစ်သူကို ခေါ်ကာ နန်းတော်သို့ ဝင်လေသည်။ ထိုအခါ မင်းယဉ်နရသိင်္ခသည် ခယ်မဖြစ်သူကို မြင်၍ စုံမက်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ညီဖြစ်သူ နရပတိစည်သူကို အထက်အညာ ငဆောင်ချမ်းအရပ်တွင် သူပုန်များ ထကြွသောင်းကျန်းနေသည်ဟု ဆိုကာ လီဆယ်၍ စစ်ချီခိုင်းခဲ့သည်။
နရပတိစည်သူလည်း ပါးနပ်စွာပင် မြင်းခံငပြည့်အား မြင်းသူတော်ကို အပ်နှံထားခဲ့ပြီး “ငါ၏အိမ်တော် တစ်စုံတစ်ရာ မှုခင်းကိစ္စတို့ရှိလျှင် လျင်စေ မြန်စေ မောင်မင်း” ဟု မှာထားကာ ချီတက်လေသည်။
သစ်ဆိမ့်ရွာသို့ ရောက်သည့်အခါတွင် ငဆောင်ချမ်းတွင်း ဘာမျှမဖြစ်သည်ကို သိရလေသည်။ ညီဖြစ်သူ သစ်ဆိမ့်ရွာသို့ ရောက်သည့်ကို သိလျှင် မင်းယဉ်နရသိင်္ခသည် ခယ်မဖြစ်သူကို နန်းတင်ခဲ့သည်။
ထိုအကြောင်းကို အစောင့်အဖြစ်ထားခဲ့သည့် မြင်းခံငပြည့်သည် ခရီးပြင်းနှင်ခဲ့ရာ မွန်းမတည့်မီ ပရိမ္မရွာသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဟန်လင်းသို့ ရောက်ခဲ့ပြီး ငါးဘတ်ချောင်းသို့ နေဝင်ရီတရောက်အချိန်တွင် ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါ မြင်းမှာလည်း ပင်ပန်းနေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ လင်းလပ်ကို ရေထင်မှတ်ကာ ငပြည့်သည် ချောင်းနံဘေးရှိ တောင်ခြေတွင် အပန်းဖြေကာ အိပ်စက်ခဲ့သည်။
ထိုအခါ မြင်းသူတော်သည် ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းရှိ သခင်ဖြစ်သူ နရပတိစည်သူ၏ အနံ့ကိုရကာ တစ်ညလုံးဟီနေလေသည်။ ထိုအခါ နရပတိစည်သူသည် မြင်း၏ ဟီသံကို ကြားရ၍ “ငါ၏ မြင်းသူတော် ဟီသည်မှန်တော် ဤအုံးတော်သည် မုချအမြဲ မလွဲပေါက်ပါစေသတည်း” ဟု အဓိဋ္ဌာန်လိုက်ရာ အုံးတော်သည် ပေါက်သွားလေသည်။ ထိုအရပ်ကို ယခုထက်တိုင် “မလွဲအုံးပေါက်” ဟု ခေါ်ဆိုကြည်။
မြင်းခံငပြည့်သည် စိုးရိမ်မကင်းနှင့် စောစောထလာခဲ့ရာ နရပတိစည်သူဆီသို့ ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအခါတွင် နရပတိစည်သူသည် အကြောင်းစုံမေးမြန်းပြီး “ငါနေသော နေရာနှင့် အနီးကလေးရောက်မှ အိပ်ရမည်လော” ဟု ဆိုကာ စစ်သူကြီး ဗိုလ်ကျော်စွာကို ကွပ်မျက်စေခိုင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် အလောင်းကို ရေမျှောရာတွင် ကျွန်းတစ်ကျွန်းတွင် တင်နေသဖြင့် ထိုကျွန်းတွင် မီသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့သည်။
ထိုကျွန်းကို “ရွှေပြည့်ရှင်ကျွန်း”၊ ငပြည့်အိပ်သော တောင်ကို “မြင်းလှည့်တောင်”၊ ငပြည့်အား ကွပ်မျက်သောနေရာကို “ကွပ်တော်ရာ” ဟု ယခုထက်တိုင် ခေါ်ဆိုကြသည်။ ငပြည့်သည် ကွပ်မျက်ခံရ၍ နတ်ဖြစ်ကာ “မြင်းဖြူရှင်နတ်” ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ဦးထွေးဟန် (၁၉၉၁ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ၊၁၇ရက်). မြန်မာ့မိရိုးဖလာဓလေ့နတ်သမိုင်း. အမှတ် - ၅၊တင့်ဆန်းလမ်း၊ဗဟန်း၊ရန်ကုန်မြို့: ရွှေပုရပိုက်စာပေ, ၁၃၇၊ ၁၃၈။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေပြည်ရှင်မြင်းဖြူရှင်&oldid=472441" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဩဂုတ် ၂၀၁၉၊ ၀၃:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။